Ibsa Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa
Ibsa Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa
Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa
(EWO/RG) | Hagayya 21, 2020
Qabsoon ilaalcha nam-tokkee fi fedhii murnaatiin geggeeffamu furmaata rakkoo siyaasaa ni qaba jedhanii yaaduun in dandahamu.
Ayyaan-laallattoitni, hattootnii fi dabta buleeyyiin Oromiyaa keeasatti afaanfaajjii uumaa turanii fi jiran ilaalcha siyaasaa fi yaada dhuunfaatiin fedhii murna tokkoo guutuuf carraaqan carraa sochii Naannoo Oromiyaattu argatan maratti dhimma bahuun akeekaa fi kaayyoo Qabsio Oromoo xiqqeessuuf ijibbaataa turan dabtaa dhimma lammummaa Oromoo fi lammiileen Oromiyaa waliin qaban gufatchiisuuf yaaluun hin dandahamu.
Eegdootni Warraaqsa Orimiyaa (EWO)n Oromoon mirga abbaa biyyummaa qabu tikfatchaa lammiileen Oromiyaa akka lammii biyya tokkootti immoo kabaja sabaa fi sab-lammiilee Oromiyaa keessa jiraniif qabu nirga namummaa lammii Oromiyaatiif wabii tahuufii qaba. Sabni kamiyyuu hanga dantaa siyaasaa murna shororkeessaa EPP eegsisinuuf hin carraaqinitti ilaalcha sabummaa isaatiin miidhaan irra gahuu hin qabu. Haala fedhe keessatti aadaa, dhuudhaa fi safuu qabu dagaagfatchaa mallattoolee Oromiyaa (aasxaa fi alaabaa) maxxanfatee jiraatchuu ni dandaha.
Saba, gosaa fi hortee fedhe yoo tahe dhimma eenyummaa isaarratti xiyyaafateen miidhaa irra gahu tokkollee jiraatchuu hin qabu. Dirqama akka lammii biyyaatti raawwatchuu qabu hunda qabxiilee tarrisa mirga lammiilee Oromiyaa ibsa Eegdoota Warraaqsa Orimiyaa EWOn Fulbaana 20-2019 baase keessatti akeekamaniin of jiraatchisuu ni dandaha. Hanga kana raawwatee jirutti sarbamiinsi mirga namoomaa irra gahu hin jiraatu.
Dhimma kana uummata keenyatti himuuf osoo hin taane farreen mirga dhala namaa garee siyaasaa dahoo taasifatchuun maqa balleessii fi ilaalcha nam-tokkee akkasumas dantaa nurna tokkoo guutuuf jecha sochaahan akka dura dhaabbatanii shira kana fashalsan yaadatchiisuuf akka tahe nuuf hubatamaadha jennee amanna. Akeekni EWOn nageenya waaraa Oromiyaa keessatti akka argamuu fi Oromiyaan mootummaa Umnataan filame akka qabaattu mootummaa ceehumsaa dhaabbatchuuf waan irraa eegamu hunda bahatchuudha. Kana galmaan gahuufis dhaabbilee siyaasaa saba isaaniif qabsaahan mara waan dandaheen ni deeggar, ni tumsa, biras ni dhaabbata.
Oromiyaan Haa Dursitu!
Gadaan Gadaa Xumura Garbumnaati.
Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa (EWO)
Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa (EWO) Waxabajjii 3/2020 Wareegama sodaannee weerara halagaa barootaaf keessummeessa baane ofirraa…
Eegdoota warraaqsa Oromiyaa (EWO), Caamsaa 22, 2020 #Gimbii. Caamsaa 22, 2020. Waraanni Humna Addaa Oromiyaa Mooraa…
IBSA EEJJANNOO QEERROO OROMIYAA IRRAA
IBSA EEJJANNOO QEERROO OROMIYAA IRRAA Haala yeroo Oromiyaa keessa jirtu irratti marii Cimaa erga goone…
Oromo Women’s Rally, London – Thursday, August 27, 2020
GMN: Waltajjii Marii Hawaasaa fi Sabootaa – Jarmayaa ABO Biyya Ambaa